Dubartiin UAE waggoota 27f of wallaaltee turte of barte - BBC News Afaan Oromoo
Rakkoon yeroo dheeraadhaaf of wallallanii turuu heddumminaan miidhaa sammuu balaa tasaan mudatuun uumama
Dubartiin Yunaayitid Arab Imratis (UAE) balaa tiraafikaa hamaan miidhaan bara 1991 irra ga'ee of wallaaltee achumaan hafte tokko haala raajiidha jedhameen waggoota 27 booda of barte.
Muniiraa Abdullaa yeroo balaan sun irra ga'u umuriin ishee ganna 32 ture. Balaan tiraafikaa isheerra ga'e sun osoo ilma ishee mana barumsaadhaa fudhachuuf deemaa jirtuu ture konkolaataan ittiin deemaa turte kan baasii (konkolaataa uummataa) biraa waliin walitti bu'e.
Ilmi ishee Omaar Webayiir jedhamu yeroo sana umuriin isaa waggaa afur kan ture yommuu ta'u, yeroo balaan sun qaqqabu ishee waliin konkolaataa tokko keessa teessuma duubaarra turan.
Nama arjoomaan onnee argachuuf ganna 9 eege
Yeroo balaa kanaas ilmashee kana garaa jalatti hammattee balaan tokkollee osoo isa hin mudatiin oolfattee turte.
Aadde Muniiraan yeroo sana obboleessa abbaa manaa ishee (soddaa) ishee waliin turte. Konkolaataa sana kan oofaa tures isa ture. Innis akkuma ishee of wallaalee ture garuu waggaa darbe hospitaala Jarman tokko keessatti deebiyee of baruu danda'eera.
Omaar gaaffiifi deebii gaazexaa UAE keessatti argamu 'Ther National' jedhamu waliin taasiseen waa'ee balaa turee sanaa ibsee, haalli fayyaa haadha isaa foyyaa'aa deemuu ibsee ture.
'Ana oolchuudhaaf na hammatte'
"Ani waa'ee ishee abdii kutee hin beeku sababiin isaas guyyaa tokko of barti jedheen yeroo hundaa abdiidhaan eega," jechuun Wixata darbe gaazexaa kanaaf yaada kenne Omaar.
"Sababiin ani akka namoonni oduu waa'ee haadha kootii kana baraniif namootaaf qoodeef, akka namoonni firoonniifi namoonni isaan jaallatan rakkoo fayyaa akkasii keessa galan du'an jedhanii abdii hin kutanneef jedheeni," jedha ilmi Muniiraa.
"Harmeenkoo ana waliin teessuma duubaarra turte. Yeroo balaan sun akka dhufaa jiru argitu, ana hammattee na oolchite."
Wallaansa waggoota dheeraa
Aadde Muniiraan yeroodhuma sana gara hospitaalaa kan geeffamte yommuu ta'u, boodarra gara Landanitti geeffamte. Achitti akka haala addaa deebii kennuu hin dandeenye garuu dhukkubbiin itti dhaga'amuu danda'uu keessa taatu godhan.
Isaan booda gara UAE'tti deebiyuudhaan Omaan waliin jiraataa wallaansaaf gara dhaabbileen fayyaa gara garaatti geeffamteetti.
Bakka itti wallanamtuttis soorata karaa ujummoo fudhataa akka lubbuun turtu taasifamaa ture.
Bara darbe, 2017 gargaarsa mootummaa UAE irraa argameen wallaansaaf gara Jarman geeffamte.
Achittis, wallaansa baqaqsanii hodhuu gara garaa argatteetti. Wallaansawwan ytaasifama turan keessaa tokko akka isheen of bartu taasisuudha.
Mormii hospitaalaa keessatti uumame
Waggaa tokkoon booda, ilmi ishee kutaa hospitaalaa keessatti mormiin isa mudate, kun ammoo akka isheen gidduu seentu kan kakaasu ture.
"Kutaa hospitaala sana keessa wal hubachuu dhabuun ture. Isheenis akka ani rakkoo keessa ta'e miira isheetti dhaga'ame akka rifattu taasise," jedha Omaar.
"Yeroo sana sagalee addaa tokko dhageessiste, ani ammoo doktorri akka ilaaluuf waamaan ture, isaan garuu waan hunduu nagaadha," jedhan.
"Achumaan guyyaa sadiin booda, osoo namni tokko sagalee ol fuudhee maqaakootiin na waamaa jiruun dammaqe.
"Ishee turte! Maqaakoo waamaa turte, ani ammoo gammachuudhaan ol utaale. Ani waggootaaf yeroon akkasii akka dhufu abjootaan ture. Jechi yeroo jalqabaaf isheen dubbatte maqaakooti."
Amma deebii kennuu ni dandeessi, nama waliinis ni dubbatti.
Amma gara Abuu Daabiitti deebitee jirti.
Rakkoon fayyaa kan Muniiraa kana fakkaatu muraasa
Namoonni waggoota dheeraaf of wallaalan deebiyanii of baruun carraan isaa dhiphaadha.
Tajaajilli Fayyaa Biyyaalessaa UK akka jedhutti namni rakkoo balaa irraan kan ka'e of wallaalee yeroo dheeraatiif ture carraan deebiyee of baruu hagama akka ta'e tilmaamuun hin danda'amu jedha.
Dorgomaan Former Formula 1 Shaampiyoonaa Addunyaa Michael Schumacher osoo bara 2013 Firaansi keessa jiruu balaa isa mudateen mataan isaa miidhamee ture. Hanga gara biyya isaa Siwiizerlaannditti deebiufamee achitti wallaansa argatu taasifamutti ji'oota ja'aaf wallaansa bakka warra of wallaalaniif taasifamuu keessa tursiifamuun isaa ni yaadatama.
'Shamarran gonkumaa nama isaan gudeedetti heerumuu hin qaban'
Yeroo dhuma kan haaromfame: 16 Ebla 2020